Abenzi besiteshi nabahlinzeki - China Channel Factory
Hot asongwe H Beam Steel
Insimbi ye-H-section iyisigaba esisebenza kahle esigabeni sezomnotho esinokwabiwa kwendawo okuhlukaniswe ngokwengeziwe nobukhulu besisindo esilinganiselwe. Ibizwa ngoba isigaba sayo siyefana nohlamvu lwesiNgisi "H".
Insimbi Engagqwali Round Ibha / Induku
Ngokwenqubo yokukhiqiza, imigoqo yensimbi engagqwali ingahlukaniswa ibe yizinhlobo ezintathu: okugoqiwe okushisayo, kokuzihlanganisa nokubandayo okudwetshiwe. Ukucaciswa kwemigoqo yensimbi engagqwali egoqiwe eshisayo kungu-5.5-250 mm.
Carbon Steel Induku
Ibanga: 201,202,304,309,310,310S, 316,316L, 410, 420,430,904L Usayizi: Round ipayipi OD: 3-1219mm, Ubukhulu: 0.1-60mm Square ipayipi Ububanzi: 7 × 7 -150 × 150mm, Ubukhulu: 0.4 ～ 8.0mm Unxande ipayipi Ububanzi: 10 × 20 - 110 × 150, Ubukhulu: 0.4 ～ 10mm Ubude obujwayelekile 6m, ca njengoba isicelo sakho senza ngezifiso
Kunezinhlobo ezimbili ikakhulukazi: i-equilateral angle steel ne-angle engalingani yensimbi. Phakathi kwe-engeli yensimbi engalingani, kukhona ubukhulu bomphetho obungalingani nobukhulu obungalingani bomphetho.
Ithuluzi lensimbi lisetshenziselwa ukukhiqiza ukushaya okubandayo okushisayo, ukushisa okushisayo okushisayo, ukufa kokuphonsa okufayo nezinye izinhlobo zensimbi.Mould iyithuluzi eliyinhloko lokukhiqiza izingxenye emikhakheni yezimboni njengokukhiqizwa kwemishini, izinsimbi zomsakazo, izinjini nemishini kagesi.